နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ: ၀ဋ်
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 7:44 AM
တိမ်လွှာဖြူ June 16, 2013 at 7:59 AM
Hmmmm ပေါက်ကွဲသံစဉ်တွေများလား ... ဒါပေမယ့်လည်း ကာရံလေးတွေနဲ့ ကဗျာလေးက ခံစားလို့ကောင်းပြန်ရော.. :)
roseayemaung June 16, 2013 at 8:33 AM
မောင်သစ္စာ June 16, 2013 at 9:17 AM
ဘဝရဲ့အပိုင်းအစလေးကို ကဗျာလေးနဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်တာ လှစ်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့အမှန်တရားလေးတခုပါပဲ..။နှစ်သတ်မိပါတယ်
witch83 June 16, 2013 at 9:40 PM
ဘယ်သူပျက်ပျက် ကိုယ်တရားမပျက်ဖို့သာ အဓိကပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ sis လေးရေ..
မိုးညချမ်း June 17, 2013 at 8:54 AM
ကျွတ်မှ ကျွတ်ပါ့မလား ?” ... ကျွတ်စေ လွတ်စေ ... စကားမစပ် ချစ်မ ရှယ်ကို ပျောက်တယ်နော် ... :)
ရာဇာထွေး June 17, 2013 at 9:56 AM
မိုးနတ်ကြယ်စင် July 3, 2013 at 7:34 AM
* တိမ်လွှာဖြူ *
စနိုးက ဘယ်လိုထင်လို့လဲဟင် !!!
* နှင်းဆီအေးမောင် *
မှန်တာပေါ့ ရို့စ်ရယ် :)))
* ချမ်းမင်းကို *
ကျုပ်ကဗျာကို နှစ်သက်မိတယ် ဆိုလို့
အတိုင်းမသိ ၀မ်းမြောက်မိရပါ၏ ကိုရင်သစ္စာ :PPPPPP
* witch83 *
ဟုတ် ....ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ချင်ပါတယ် မမ witch83 :)
* မိုးညချမ်း *
ဟုတ်ပါရဲ့ မိုးညရယ် ....
မိုးနတ် ဘယ်လိုမှကို မအားလို့ပါဟယ် :)))
* ရာဇာထွေး *
ရိုးမြေကျ June 17, 2013 at 9:18 PM
အွန် ကဗျာဆရာတွေ အသံကောင်းဟစ်နေကြတဲ့
ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ မေတ္တာတရားတွေ တကယ်ရှိဘူးလား ရှိဘူးလား
ခိုင်ဖူးရှိန် ခိုင်မာသောဇွဲသတ္တိအားမာန် တို့နဲ့ ဖူးသစ်ဝေ ပညာညွန့် တလူလူတတ်ကာ ရှိန်လျှံ ငြီးငြီးဝင့်ထည်နိုင်ပါစေ တဲ့ ရှင် June 18, 2013 at 5:29 AM
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) June 18, 2013 at 9:21 AM
ညည အိပ်ခါနီးရင် တရားခွေလေး ဘာလေး
ဖွင့်ပြီး နားထောင် အိပ် ကျွတ်လွတ်အောင် ပြောပေးတား))။
ရင်ခုန်ရသူ June 19, 2013 at 11:51 PM
မိုးသက် June 22, 2013 at 1:48 AM
hninnse young June 26, 2013 at 8:26 AM
မိုးနတ်ကြယ်စင် July 3, 2013 at 7:44 AM
သိဘူးလေ မမရိုးမြေရဲ့ ...မမရော သိဘူးလား ???
အသဲလေး နဲ့ ဖူး *
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) *
အဲ့ တရားခွေနံမည်လေး ဘာတဲ့ :PPPPP
ဟုတ်ပါ့ ရင်ခုန်က မိုးနတ်ကို ပစ်ထားဒယ် :((((
တိပါဘူး မောင်မိုးသက်ရယ်... :)
တော်တော်ကြာ ဒိထက်ပိုပြီး ဆံပင်တွေ
စံပယ်ချို July 21, 2013 at 6:02 PM
မောင်ရေခဲ(အဝတ်နီ) July 30, 2013 at 2:13 PM
မိုးနတ်ကြယ်စင် September 6, 2013 at 3:03 AM
မိုးနတ်ကြယ်စင် September 11, 2013 at 6:10 AM
ဟုတ်ပါ့ မဂျီးဂျက်ရယ်နော် * မမစံပယ်ချို *
မိုးနတ်ကြယ်စင် September 11, 2013 at 6:14 AM
ဟာ ကျုပ် ဆီမှာလာမန့်တယ်သူက ဘာလို့ ကျုပ်နံမည်နဲ့ မန့်ခဲ့တာလဲဗျ ..
နားမလည်ဘူး အဲဒါ ဘူတုန်း ?
စကတ်တိုဂါဝန်နဲ. လင်ငတ်တဲ.ပျိုပျိုမေ ဒူးထောင်လိုပေါင်ကိုကား အသည်းတွေများယားလှပေ sexyလိုပုံကိုတု ရင်လယ်စုပြတဲ.မေ မြန်မာဆိုဒီလိုလားမင်းကသက်သေ မျိုးကိုဖျက်တဲ.မအ၀ှာတွေ အရှက်ကိုလေကွယ်အုံးဗျလေး ကောင်းခညို
sanpar la September 18, 2015 at 3:52 AM